Medical ịwa ahụ uwe ahịa
Ahụike latex gloves chọrọ mkpa nchekwa nchekwa dị elu. Ọ na-achọ ịga ụlọ ọgwụ ọzọ na nkwakọ ngwaahịa onwe ya. O nwekwara ụdị aka ergonomically curved nke dabara na mkpịsị aka ise ahụ ma ọ dị mma iyi. Ọbụna n'oge ọrụ oge, njikwa iru mmiri dị mma nwere ike ịnọgide na-enwe ọdịdị na nkasi obi nke ndị ọrụ ahụike na-eyi uwe aka, ma jiri ọrụ ahụike rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu.
Asọmpi na eriri mmepụta eriri
Usoro mmepụta nke ogwe aka ịwa ahụ ahụike kwesịrị inwe usoro nhazi ezi uche dị na ya dabere na njirimara kemịkal nke akụrụngwa yana usoro ịkpụ aka. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, site na nkwalite nke igwe na-eme latex glove na mgbakwunye nke akụrụngwa akụrụngwa, ihe mgbochi maka ụlọ ọrụ ndị nwere ike iwepụ nwere ike ịbawanye elu, ọkachasị n'ọhịa nke ịwa ahụ ọgwụ. Ọchịchọ a na-aga n'ihu na-eto,bỌ bụ na ndị nrụpụta pere mpe dị ole na ole na -emepụta ahịhịa na-arụ ọrụ.
Tụkwasị na nke a, n'ihi nnukwu ụgwọ nke ihe eji arụ ọrụ ọgwụ ịwa ahụ latex gloves mmepụta akụrụngwa, yana nkwado siri ike nke ndị ọrụ aka na akụrụngwa maka ihe akụrụngwa, ndị ọhụụ ọhụrụ ga-enwerịrị ike ego na akụrụngwa iji merie ụlọ ọrụ ndị dị ugbu a .
A na-ejikarị ya eme ihe maka arụmọrụ chọrọ oke nke ike, dị ka ọrụ, nnyefe, ntinye akwa catheter, nkwadebe nke ngwakọta nri nne na nna zuru ezu, wdg.
Nke gara aga: Nyocha ahụike latex gloves production line
Osote: High Quality China Pu ጓnye Production Production Machine / Automatic uwe ntinye Line
Akpụkpọ ahụ na-eme igwe
Igwe Latex Glove Making
Rubber uwe Production Line